UDmitry Shepelev waqala ukusebenza kumabonwakude.
Phantse unyaka wonke iprojekthi eyaziwayo yeCala laseKhaya "Ipropati yePropati" yachithwa ukuba "ifaniswe". Ukususela ekuqaleni, u-Yuri Nikolaev kunye noDmitry Shepelev baqalisa ukutshintshwa, okwakubakho ukulinganisa okuphezulu.
Emva kokuba saziwa ngokugula okukhulu komfazi kaDmitry Shepelev, umbukeli wayefanele alahle umsebenzi wakhe oqhelekileyo, ukunika ixesha elide kuJeanne Friske, owayenengqondo yokunyuka kwengqondo. UDmitry walwa ngokugqithiseleyo ubomi bomfazi othandekayo, ehamba naye kwiiklinikhi apho athembisiwe ukuncedisa. Wonke amathuba, nokuba eyona nto, yayisetyenziswa. Nangona kunjalo, nangona i-Shepelev yenza konke akwaziyo, kwakungenakwenzeka ukunqoba isifo esiyingozi.
Ukufa kukaJoan kwakunzima kakhulu kumbonisi. Ukuzama ukuphunyuka kwamehlo enobubele, uShepelev kunye noPlato omncinci waya kulo lonke ihlobo eBulgaria.
UDmitry wabuyela emsebenzini kuphela ekupheleni kukaJulayi, kwaye kuphela ngosuku olunye - ukuqhuba umdwebo wokuqala weNdebe yeHlabathi ye-2018 ngokubambisana nomzekelo uNatalia Vodyanova. Emva koko umbonisi waphinda waya kuPlato eBulgaria.
Iindaba zakutshanje zaza zavuya kubabalandeli bakaDmitry Shepelev kunye nabaphulaphuli kwiprogram "Ipropati yeRiphabliki". Umbonisi wabuyela eMoscow kwaye, kunye no-Yuri Nikolayev, baqala ukufakela ukukhishwa kwenkqubo entsha ephandwayo.
Kwimidiya yasekhaya, kwakukho iifoto zokuqala ezivela kwi-studio ye-First Channel. Abamangalisi bakaDmitry bamangaliswa ngenguqu ebonakalayo ekubukeni kwangaphandle kweShepelev: isoloko esonwabileyo nesantshabisayo ibukeka ibuncinci kwaye ingabonakali, kwaye kwiitempile zenkokeli, imvalo ibonakala ngokucacileyo.
I-Version: I-Pugacheva ayikwazi ukucula ngenxa yokutyelela iChernobyl
Kwidrash: utywala uVolochkova ubonakale kumabonwakude, kwividiyo
Uthando lwangaphambili uVladimir Presnyakova uxele ngothando oluyimfihlo kunye neFedor Bondarchuk
I-Sobchak iza kubeleka intombi, kwaye uSemenovich uya kuba ngumama wamawele
Imveliso ye-dayday exotic - i-pancake nebhanana, zokupheka kunye nesithombe
Yonke into owafuna ukwazi nge-asthma kubantwana
Inendima ye-intuition ebomini bethu
I-Placenta - ilungu elikhethekileyo ekukhulelweni
Unokunika njani uncedo lokuqala lokuchoking shchitovidki
Nastia Prikhodko: Ndathengiswa ngabo bonke abahlobo bam!
Iibisiki kunye ne-nutmeg
Unokuzuza njani kwimeko enzima?